Ribbon Shredder: Ribbon Splitter, Ribbon Curler Tools amin'ny famonosana fanomezana
Hamantatra bebe kokoa >>
Ataovy mihodinkodina ny kofehyo sy ny tsipìkao & Aza kivy! Mikoropaka sy mikoropaka amin'ny IRAY IRAY!
Amin'ny fampiasana ny ribbon curling fitaovana ribbon shredder slitters,
afaka manao tsipìka isan-karazany ho haingon-trano sy manao fanomezana miavaka.
Manaova Ribbon Effects manokana ho an'ny fononao / Fanomezana miaraka amin'ny RSPAC™ Ribbon Shredder!!!
RSPAC™ fitaovana fandravana ribbon dia ny feno sy azo itokisana indrindra curl and shred toolkit eny an-tsena.
Fitaovana kely, Big Fun
Ny fitaovana mora ampiasaina, afaka manampy amin'ny fanaparitahana sy fikorotanana ireo tady tsara tarehy amin'ny fisintonana tsotra izao. Mba hanampiana singa haingon-trano bebe kokoa amin'ny fonosana famonosana DIY ary ataovy miavaka ny fanomezanao.
Styles isan-karazany & loko
Misy amin'ny lafiny tokana, lafiny roa, miaraka amin'ny nify metaly na nify plastika izay total 4 fomba samihafa mifanaraka amin'ny zavatra takinao, ary farafaharatsiny 4 loko samihafa isaky ny famolavolana.
Modely vaovao ho avy tsy ho ela
2 modely vaovao dia mbola eo an-dalam-pandrosoana sy fanovana, ho hita tsy ho ela. ihany koa, dia hanohy hamolavola kojakoja kely fitaovana kely, Tongasoa eto Mifandraisa aminay.
Natokana ho an'ireo mpampiasa anay izahay & Products
Raha tsorina, mivoatra isika amin'ny fanaovana RSPAC™ Ribbon Shredder, ny fitaovana famonosana fanomezana feno sy azo itokisana indrindra eny an-tsena.
Wsatroka dia ribbon shredder?
Ribbon shredder, antsoina koa ribbon curler,mpanapaka kofehy,ribbon mini slitting fitaovana,ribbon mini slitting milina, na ribbon splitter.
Izy io dia fitaovana fanodikodinana sy fanapotehana tady vita amin'ny plastika ary misy andalana plastika na nify metaly misy fitomboka amin'ny isa sy halavany apetraka eo amin'ny valanorano ambony amin'ny fitaovana..
Misy karazana shredder haingon-trano maromaro eny an-tsena，toy ny: ribbon shredder misy nify metaly,ribbon shredder sy curler,ribbon splitter amin`ny plastika nify,sisiny roa ribbon shredder ary fitaovana fikororohana,kofehy slitter,ribbon shredder fanapahana taratasy,ribbon shredder curler fitaovana,sns.
Ary ny valanoranony ambany ny fitaovana amin`ny lavaka hanaiky ny lohataona retainer.
Fitaovana ampiasaina amin'ny tanana mba hanafoanana ny asa mandreraka sy ny fotoana ilaina amin'ny fanapahana sy ny fikororohana kofehy amin'ny hety mba hahatonga azy ho haingo kokoa.,amin'ny fanerena amin'ny valanorano ambony sy ambany, avy eo misintona fotsiny ny kofehy amin'ny alalan'ny fitaovana.
Izy io dia natao ho an'ny slitting fitaovana poly ribbon amin'ny sakany voalohany ho plurality ribbon stripes ny sakany kely kokoa ahitana,avy eo mikoropaka mba haingo. toy ny ampiasaina amin'ny fonosana famonosana fanomezana sy ny Stuffing, izay misy kofehy kofehy azo atao haingon-trano kokoa amin'ny fampiasana azy.
Fantaro bebe kokoa ny antsipiriany>>
Ribbon Shredder Tool UK Video Full HD 1080p | Honstar Gift Wrapping Co., Ltd.
Fitaovana mahagaga manampy amin'ny famoronana fanomezana tsy manam-paharoa & tsy nampoizina
Habe kely sy lanja maivana ho mora ampiasainao
MAHAVARIANA “nify” ny shredder ho an'ny fisintonana mora
Handravaka ny fanomezana Krismasy eo an-tampony miaraka amin'ny fikororohana tsy manam-paharoa sy ny bounce ribbon effect
Mba hanaovana shreds ho Paska atody harona na fanomezana hafa famenoana
Zarao ho tady balaonina ho an'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana na fampakaram-bady
Manolotra ny shredder ribbon feno sy azo itokisana indrindra eny an-tsena izahay
ny 70,000 mpampiasa, Andao hojerentsika izay lazain'ny sasany?
Tianay ny mpampiasa anay ary manolo-tena tanteraka amin'ny fitazonana ny fitokisany
manolotra vokatra mahagaga sy fanohanana miavaka aorian'ny fivarotana!
Mahatalanjona!!!!!!!!!!!!!!Ny shredder tsara indrindra efa nampiasaiko hatramin'izay. Tena manoro hevitra. Tsy hatahotra ny hopotehina intsony ianao rehefa manao ny famonosanao.
Tena afa-po aho tamin'ny fahombiazan'ny vokatra sy ny fandefasana haingana! Tena manoro hevitra ny vokatra sy ny mpivarotra aho.
Miasa tsara. Araho fotsiny ny torohevitry ny hevitra hafa sy …Miasa tsara. Araho fotsiny ny torohevitry ny hevitra hafa ary apetraho “nify” ny shredder eo an-tampon'ny ribbon.
RSPAC Ribbon Shredder no fitaovana famonosana fanomezana malaza indrindra! Izahay no Factory!!
Tonga miaraka amin'ny endri-javatra mahafinaritra, premium "nify" ho an'ny fisintonana, loko mamirapiratra, Fomba isan-karazany safidy & betsaka kokoa!